Bhenefiti yeMobile Kushambadzira Mashini | Martech Zone
Monday, May 6, 2013 Svondo, May 5, 2013 Jenn Lisak Golding
Chimwe chezvinangwa zvepamusoro chemasangano kuenzanisa timu yekutengesa neyekutengesa kuitira kuti ivo vari kutaurirana nekubatanidza maitiro avo ebasa zvakanyanya. Kune rimwe divi, kushambadzira kunoda raibhurari yezvivakwa uye inotungamira nzira yekugadzira, nepo kutengesa kuchida kurerukirwa kwekufambisa uye yekutengesa chibatiso pamunwe wavo. Kunyangwe zviitwa zvemadhipatimendi izvi zvingave zvakasiyana, zvichiri zvakanyatsobatana. Apa ndipo pane pfungwa ye nhare yekushambadzira michina inouya.
Takashanda pamwe nechikwata kuFatstax, a yakashambadzirwa iPad yekutengesa app, pane iyi infographic, iyo inopa masangano emabhizimusi neapp inobvumidza yavo yekutengesa timu kuwana nyore nyore kushambadzira chibvumirano uye timu yekutengesa kuti vakwanise kuiisa kunzvimbo imwechete, senge repositi. Iyo app zvakare inosangana neCRM masystem, kuti iwe ugone kutanga nyore kusimudzira kutungamira uye kutora rumwe ruzivo nezve zvinotungamira. Pfungwa ndeye kupa timu yekutengesa bhizinesi kufamba, nekukwanisa kutumira zviratidziro, mapepa evachena, infographics, nezvimwewo kune zvavanotarisira pamusangano wekutengesa, uye kushambadzira kunogona kupa kutengesa nemhando dzezvinyorwa zvavanogovana online. Mapoka ese ari maviri anoziviswa nezve izvo zviri kugoverwa uye izvo zviripo, izvo zvinotyaira kutaurirana kuri nani mukati mekambani uye kune vanotarisira.
Iyi infographic inodonha mune izvo nharembozha yekushambadzira otomatiki iri chaizvo uye kuti ingashandure sei nzira iyo sangano rako rinosvika pakutengesa uye kushambadzira macircuit. Inopawo "chaiyo-nguva" rubatsiro panguva yekutengesa maitiro. Iwe haungazvide here kana iwe ukapihwa ruzivo mukati memaminetsi ekuchikumbira icho? Izvi ndizvo zvinoshandiswa kushambadzira kwemagetsi.
Uri kushandisa chero mhando yekutengesa maapps ekuvandudza yako kutengesa kuita? Kana zvirizvo, ndeapi acho? Wakambonzwa nezve chero chinhu chakadai kare? Uri kushanda sei kune "bhizinesi kufamba?"
Tags: kuenzanisa kutengesa uye kushambadziraboka rekutengesanhare yekushambadzira michinaKugonesa Kugonesa
May 24, 2013 pa 3: 30 AM